ALAOTRA : Vaventy ny hazan-drano miakatra amin’izao fotoana izao saingy lafo ny vidiny
Mitobaka eny an-tsena ny hazan-drano amin’izao fotoana izao, izay hita fa vaventy dia vaventy tokoa saingy tsy takatry ny kely vola ny vidiny. 23 mai 2017
Avy any am-potony mihitsy no voalaza fa lafo izy io, ka voatery tsy maintsy mivarotra lafo ihany koa ireo mpiantoka izay maninjara izany ao an-tsena.
Raha ny fanamarihana nataon’ireo mpanarato izay nanontaniana dia efa sarotra ny fihazana hazan-drano amin’izao fotoana izao noho izy io hita ho nihena raha ny ao Alaotra. Na izany aza, hoy izy ireo, dia tsapa fa vaventy avokoa ny miakatra na dia somary manahirana ihany aza ny fahazoana izany. Hita kosa anefa fa manomboka hita eny an-tsena ireo trondro izay efa saro-tadiavina fahiny toy ny blakibasy sy ny amalona vaventy.
Manomboka mangatsiaka ihany koa anefa ny andro, hoy ireo mpanarato, ka mahatonga io fahasahiranana amin’ny jono io raha tsy mandeha somary lavidavitra na miditra lalindalina. Nanambara kosa anefa ny mpanjifa fa isan’ny fototry ny fiakaran’ny vidin’ny hazan-drano ny fisian’ireo mpanao vato teratany vahiny izay tsy mihinana kisoa. Nanomboka tany no efa hita ho nisy fiakaram-bidy ny hazan-drano ary tsy nihena intsony izany izany hatramin’izao.
Betsaka ihany koa anefa no milaza fa tokony hamafisina ny fanaraha-maso ny sehatry ny fanaratoana, indrindra ny ao Alaotra mba hisorohana ny mety hahalany tamingana ireo hazan-drano misy ao noho ny afitsok’ireo mpanao harato lava sy ireo mpampiasa lay misy ody moka hanaratoana, ka mahatapitra tsikelikely ny zana-trondro.